Ndị APGA n'Ọnịtsha North Emee Ngagharị Iwe Maka Mpụtara Nhọpụta Ọchịchị
Ịkpọ ganịganị ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'okporo ụzọ ahụ e si aga n'isi ụlọ ọrụ ahụ nchịkọba nhọpụta ọchịchị dị n'aka n'ala anyị, bụ 'Independent National Electoral Commission' (INEC), ngalaba ya nke steeti Anambra dị n'Awka. Nke ahụ bụ nke ha mere iji katọọ mpụtara ahụ ụlọ ọrụ INEC weputara, bụ nke na-akọwa na ọ bụ maazị Douglass Egbuna nke otu ndọrọ ndọrọ 'People's Democratic Party' (PDP) tuuru ugò na ya bụ nhọpụta, ebe ha onwe na-ekwu na ọ bụ maazị Tony Nwora nke otu ndọrọ ndọrọ APGA tuuru ùgò na ya.
N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ banyere nke ahụ, onyeisi oche nchere oge n'okpuru ọchịchị Ọnịtsha North, bụ maazị Patrick Aghamba kwùrù na mpụtara ụlọ ọrụ INEC kpọpụtara abụghịdị ihe a tụtara n'akwụkwọ n'ọgbọ nta nkwàdo ahụ, chaa chqa, ma kpọkuo ụlọ ọrụ ahụ ka ọ kagbuo nhọpụta ma hazigharịa nhọpụta ọzọ n'ọgbọ nta nkwàdo ahụ iji hụ na udo na ikpe nkwụmọtọ chịrị.
N'otu aka ahụkwà, ọtụtụ ndị ọzọ ndị sonyere na ya bụ ngagharị iwe gwara ndị nta akụkọ, mere ka a mara na ndị otu ndọrọ ndọrọ PDP gwùrù ojoro ghe anya oghe na ya bụ ntụliaka, ọ kachasị n'ebe ahụ a nọrọ gụkọọ ihe a tụtara n'akwụkwọ, bụ ebe ha kwuru na ndị ọrọ nchekwa na ndị ọrụ INEC gbochiri ndị otu ndọrọ ndọrọ APGA ka ha bàta mgbe a na-agụkọ ya. Ha kpọkuzịkwara ndị ụlọ ọrụ INEC ka ha na-agbaso usòrò iwu n'ihe ọbụla ha na-eme iji hụ na ihe ọbụla gara otu o kwesiri.
N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ oge ọ natachara mkpesa ndị ahụ, onyeisi ngalaba nhazi n'ụlọ ọrụ INEC, bụ maazị Ibe Uche-Agwụ kpọkuru ma rịọ ndị ahụ ka ha wetuo obi, ọbụnadị dịka o kwere nkwa na ụlọ ọrụ ahụ ga-eleba anya na ya bụ mkpesa. Ọ kpọkuzịkwara ha n'otu aka ahụ ka ha wègakwa mkpesa ha n'aka òtù ahụ na-ahụ bànyere ikpe maka nhọpụta ọchịchị, dịka usoro iwu siri dị iji wee lebàra nke ahụ anya nke ọma.